Izofakaza enkantolo intombazanyana (8) eyadlwengulwa eDros
UNICOLAS Ninow. ovume icala lokudlwengula, ubephelezelwa amalungu omndeni ngesikhathi evela enkantolo enkulu ePitoli ngoMsombuluko. Isithombe: Oupa Mokoena/African News Agency (ANA)
IZOFAKAZA namhlanje intobazanyana eneminyaka ewu-8 eyadlwengulwa ngowesilisa endaweni yokudla, iDros restaurant, eSilverton ePitoli.
UNicholas Ninow (22) obengummangalelwa ngoMsombuluko uvume icala lokudlwengula, elokutholakala nezidakamizwa nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Uliphikile icala lokushaya unina kamgilwa nabanye abasebenzi baseDros ngesikhathi esebanjiwe kulesi sigameko esenzeka ngoSepthemba 22 nyakenye.
NgoLwesithathu intombazanyana abanjwa oqotsheni ngunina wayo eyidlwengula, kulindeleke ukuthi ifakaze phambi kwenkantolo ngokwenzeka ngololo suku.
Ngesikhathi iguqiswa inkantolo ngoLwesibili abashushisi baveze ukuthi namhlanje kuzofakaza le ntombazanyana nomunye ufakazi.
UMshushisi u-Advocate Dorah Ngobeni ngoLwesibili ubize umuntu ogada izingane nomsebenzi waseDros abafica uNinow nentombazanyana ethoyilethe. Bobabili labo fakazi bazise inkantolo ukuthi bashiya emsebenzini ngenxa yokuthikamezeka ngokomqondo emuva kwento abayibona.
Ogada izingane uthi akubona nokwakushiwo unina wengane kulandela lesi sigameko, kwamenza washiya emsebenzini, futhi akasaziboni esebenza nezingane.
Izinyembezi bezigcwele emehlweni alo wesifazane ngesikhathi echazela inkantolo ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi akhohlwe akubona ngalolo suku, nokuthi wayegade le ntombazanyana nomfowabo usuku lonke ngaphambi kokuthi ahlabe ikhefu lesidlo sasemini. Uchazele inkantolo ukuthi kwakunzima kangakanani ukuzama ukuvula isicabha uNinow ayesivalile enukubeza intombazanyane. Uthe kwathatha abantu abahlanu ukuvula lesi sicabha.
NgoMsombuluko uNinow ufike enkantolo ephelezelwa ngunina noninakhulu. Isitatimende sokuvuma icala usifundelwe ngummeli wakhe.